Ogdị Vinyl Ala
Fanjingshan Antibacterial Homogeneous Vinyl Ala
Tianshan ịkwanyere Vinyl flooring
Udi di iche-iche nke ESD Vinyl Floor
Etedị Vinyl dị iche iche
Nondirectional Vinyl Ft Roll
Ngwa ngwa ulo
Plastic N'obe Nzọụkwụ
Kedu otu esi edozi nsogbu ọkọ nke PVC plastic floor?
site ha na 2021-05-13
Plasticlọ plastik PVC bụ ụdị ọhụrụ nke ihe ịchọ mma nke ụlọ dị mfe nke na-ewu ewu n'ụwa taa, nke a makwaara dị ka "ihe eji eme ala dị larịị". A nabatara ya na obodo ukwu na obodo ukwu na China ma jiri ya mee ihe. Kwanyere plastic n'ala ha ...
Nlekọta maka idebe gloss nke PVC plastic
A na-ejikarị ụlọ plastik plastik eme ihe n'ọtụtụ ebe na azụmahịa na ebe obibi, nke na-eme ka ọkwa ahụ dị elu na ọdịdị ohere. Agbanyeghị, ọ bụrụ n'ịchọrọ idobe ụlọ ahụ na-agbanwe agbanwe ogologo oge ma nwee ọmarịcha, ị ga-emerịrị ihe ndị a na usoro iji ya. Mee ka ọ dị ọcha Ejila cleanin ...
Kedu ala PVC nwere nkwụsị abrasion kacha mma?
site ha na 2021-04-16
Banyere eyi eguzogide nke ịkwanyere flooring, ọ mgbe niile bụ otu n'ime ndị isi okwu na ndị ahịa ntị ka. The eyi eguzogide nke ịkwanyere flooring na-metụtara ya onwe ya. A na-ekekọta ala PVC n'ime ụzọ atọ: kọmpat ala, ụfụfụ ala na homogeneous na transpar ...
Floorkwanyere ala nke ụlọ PVC maka ụlọ ndị nọọsụ
site ha na 2021-03-22
Ndị agadi bụ ndị nwere nsogbu na ọha mmadụ, yana ịchọ mma obibi nke ebe obibi ha ka a ga-emegharị maka ọdịdị anụ ahụ na nke mmụọ nke ndị agadi iji mepụta gburugburu obibi dị mma, mara mma, dị mfe ma dịkwa mma yana mmadụ pụtara ìhè. Ala dabara f ...
Nsogbu ndị nkịtị nke PVC ala na-etinye!
site ha na 2021-03-19
Floorlọ PVC aghọwo ihe ọhụrụ ụlọ ewu na ahịa. Agbanyeghị, iwu ihe na-ezighi ezi n'oge usoro ịtọgbọ ga-enwe mmetụta dị ukwuu na nsonaazụ ya niile. Ihe ndị a bụ ọtụtụ nsogbu nkịtị ga - enyere aka ịgbatị nrụpụta nke ụlọ PVC gị. Ndụ ọrụ. ...
Floorkwanyere flooring oru Standard-European Standard
Ekebiri ọkọlọtọ European maka PVC floor dị ka EN. Ọ bụ mbụ ụkpụrụ ule nke mba iri na ise nke European Economic Community binyere aka. A na-ekewa ọkọlọtọ ule a n'ọtụtụ ọdịnaya. N'ime ha, TPMF ọkwa nke ngwaahịa homogeneous anyị na-ekwukarị na-abịa site na ...
Isi ihe atọ dị iche iche dị iche na ịdị iche iche nke ala PVC
site ha na 2021-03-12
Kedu ihe kpatara ọdịiche dị na mma na ọnụahịa maka ala vinyl homogeneous? 1.Weight PVC flooring na-tumadi mere nke polyvinyl chloride ihe onwunwe, a ga-enwe obere ego nke nkume ntụ (calcium carbonate) ihe onwunwe; ọdịnaya nke ntụ ntụ ga-emetụta ịdị arọ nke ala PVC, mana ọ ga ...
Esi ewepu mama na ịkwanyere plastic n'ala？
Kedu otu esi ewepu mama na ala nke na-agwọbeghị? Rag: Ọ ka mma ihicha tupu gluu akpọọ nkụ ma sie ike. N'oge a, gluu bụ mmiri mmiri. A na-ehichapụ ya n'ụzọ doro anya mgbe ị jiri ya ma ọ bụ jiri akwa kpochaa ya, wee hichaa gluu nke fọdụrụ. Mmanya: Mpepe n’ala ...
Nwụnye usoro nke mgbochi-agbanwe agbanwe PVC ala
site ha na 2021-01-20
1. Hichaa ala wee chọta eriri etiti: Nke mbụ, hichaa ala slag, wee chọta etiti ụlọ ahụ site na iji ihe e ji atụ ihe, see eriri dị n’etiti, ma rịọ ka e kesaa eriri ahụ n’ụzọ kwụ ọtọ. 2. dina ...
Kedu ihe kpatara eji anabata vinyl dị iche iche n'ụlọ ọgwụ?
1. Nche Ihe eji eme PVC ala nke PVC maka karama mmiri ara ehi na usoro infusion ọgwụ, na-enweghị ihe ọ bụla na-egbu egbu, "0" formaldehyde. N'otu oge ahụ, ma ọ bụ usoro ụfụfụ ma ọ bụ usoro ndị ọzọ nke ala PVC, nrụpụta ya dị mma nke ukwuu, nke nwere ike ...
Usoro nwụnye nke ala vinyl homogeneous
Floorkwanyere ala bụ nnọọ nkịtị na oge a na ụlọ ọrụ mma, na uru nke waterproof, fireproof, ogbi, wdg The yingtọ nzọụkwụ nke ịkwanyere n'ala n'oge mma ndị dị ka ndị a: 1. Yet mbuaha onwe leveling slurry na-ewu ụlọ, ọ ga-asọpụta ma dozie ala n'onwe ya. Ọ bụrụ na ndị des ...
Giqiu homogeneous vinyl floor mmezi Atụmatụ
Giqiu homogeneous vinyl floor ka a mesoro na-enweghị waking. Mgbe arụchara ya na ihichachaa ya, enwere ike iji ya ozugbo. Na mgbakwunye na ndozi dị mkpa n'oge eji, a ga-ejikwa homogeneous Permeable n'ala mee ihe ụfọdụ na obere nkọwa na ọrụ na ndụ kwa ụbọchị. Na-atụle ...
Okwu: Jinshan Road, High Tech District, Linyi obodo, Shandong Province, China